एमालेको मेची महाकाली अभियान सुरु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एमालेको मेची महाकाली अभियान सुरु
शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ ११:०५ मा प्रकाशित !
२१ फागुन, झापा । नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियान सुरु भएको छ । शनिबार झापाबाट अभियान सुरु भएको हो । एक नम्बर प्रदेश संयोजक भीम आचार्यलाई, राष्ट्रिय तथा पार्टीको झन्डा हस्तान्तरण गर्दै अभियान सुरु गरिएको हो । अभियानमा २०० गाडी लस्कर लाग्ने एमालेले जनाएको छ ।
अभियानको सुभारम्भ गर्दै एमाले अभ्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी हुन नदिने शक्ति संविधान कार्यान्वयन गराउन नदिन लागेको बताए । मेची महाकाली अभियान कसैका विरुद्ध नभएको स्पष्ट पार्दै ओलीले भने, “हामी कसैको अधिकार खोस्दैनौं । सबैको अधिकार स्थापित गर्न लागेका छौं। अभियान, जाति, भाषा र कसै विरुद्ध लक्षित छैन।” एमालेकै कारण संविधान जारी भएको दाबी गर्दै उनले चुनाव घोषणा पनि एमालेको दबाबले भएको बताए ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल अभियान कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ले बताए । “जस्तो सुकै व्यवधान पन्छाउँछौं । सबै समुदायलाइ कुरा सुनाउन चाहन्छौँ, ” उनले भने, “संविधानमा तोकिए बमोजिम निर्वाचन लागि यो अभियान हो ।”
उनले संविधान जारी गर्न नदिने तत्व नै निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । एमालेलाई बिखन्डनकारी भन्नेको भन्डाफोर गर्ने पोखरेलको चेतावनी छ ।
१५ दिने अभियानमा सहभागी हुन पार्टीका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायत नेता यहाँ आइपुगेका छन ।
झापाको काकडभिट्टाबाट सुरु अभियान कञ्चनपुर हुँदै चैत ५ गते सुर्खेत पुगेर समापन हुने एमालेले जनाएको छ । अभियान अन्तर्गत संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकताका र सामाजिक सद्भावको नारा रहेका छन । अभियानका लागि नेपाली, मैथिली, थारु, डोट्याली र भोजपुरी भाषामा प्रचार सामग्री वितरण गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराइले जानकारी दिए ।
PREVIOUS POST Previous post: पाल्पामा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्यो
NEXT POST Next post: क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क बस सेवा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ ११:०५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ ११:०५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ ११:०५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ ११:०५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ ११:०५